Ekpere maka nnyefe dị larịị. ? Nwee nnyefe dị mma
Ekpere maka inye gi nsogbu n’adighi nsogbu Ha nwere ike inyere anyị aka oge niile na iwepụta ezigbo ozi. O nwere ike inyere anyị aka ịnagide oge a siri ike dịka iweghachite ụwa.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya na ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụ ihe omume a otu a na-ahụkarị, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ọnọdụ dị nro nke nne na nwa a na-amụbeghị amụ nọ na nsogbu oge niile. Inwe ike ịrịọ maka nnyefe dị mma nwere ike iwetara nne ahụ obi ike na udo.
Na mgbakwunye, ekpere a bụ ihe nkasi obi maka ndị ezi na ụlọ maka gị maara nke ahụ Ekpere dị ike na ịmụ nwa abụghị ihe dị mfe, ya mere onye ezinaụlọ nke gbabara n’ekpere nwere ike nwee udo na obi iru ala nke na-enye obi ike nke ịmara na Chineke n’onwe ya na-elekọta ndụ abụọ ahụ n’oge ahụ.
1 Ekpere maka nnyefe na-enweghị nsogbu Gini bu ebum n’uche n’ekpere ndị a?
2 1) Ekpere maka nnyefe n’enweghi nsogbu
3 2) Ekpere Holy Ramon Nonato maka imu nwa (ezigbo omumu)
4 3) Ekpere maka umu nwanyi di ime
5 4) Ekpere tupu ikwuputa (gaa nke ọma)
Ekpere maka nnyefe na-enweghị nsogbu Gini bu ebum n’uche n’ekpere ndị a?
Ebumnuche nke ikpere ekpere a ka amụrụ ezi nwa bụ na ma nne ma nwa nọ n'ụzọ ahụ nwere ike ịdị mma, ịbụ ịmụ nwa abụghị nsogbu ihe nile na-emekwa ọsọ.
Enwere ike ịmalite ekpere a n'isi mmalite afọ dịka ọ na - ewetakwa ezinụlọ na ezinụlọ udo na obi iru ala. Intobanye oru na uche gị ma ọ bụ obi gị jupụtara na nhụjuanya dị oke egwu ma ọ bụ nke a mere ekpere a ji dị mkpa.
1) Ekpere maka nnyefe n’enweghi nsogbu
"Mary, nne nke ịhụnanya mara mma, nwa agbọghọ na -atọ ụtọ nke si Nazaret, Onye kwusara ịdị ukwuu nke Onyenwe anyị na, na -asị" ee ", mere onwe gị nne nke Onye nzọpụta anyị na nne anyị: Gee ntị taa n'ekpere m na -ekpe gị:
(Mee arịrịọ gị)
N'ime m ka ndụ ọhụụ na - eto: obere nke ga - eweta ọ joyụ na ọ joyụ, nchekasị na ụjọ, olileanya, obi ụtọ n'ụlọ m. Lekọta ya ma chebe ya, Ka m na-eburu ya n'obi m.
Na nke ahụ, n'oge obi ụtọ nke ịmụ nwa, mgbe m nụrụ ụda mbụ ha ma hụ obere aka ha, enwere m ike ikele Onye Okike maka ihe ịtụnanya onyinye a O na-enye m.
Nke ahụ, na-agbaso ihe nlereanya na ihe nlereanya gị, enwere m ike iso ma hụ na nwa m nwoke na-eto.
Nyere m aka ma gbaa m ume ịchọta n'ime m ebe mgbaba na, n'otu oge ahụ, mmalite ịmalite iji ụzọ nke gị.
Ọzọkwa, nne m, lelee ụmụ nwanyị ndị ahụ na-eche ihu naanị oge a n'enweghị nkwado ma ọ bụ enweghị ịhụnanya.
Ka ha nweta mmetuta nke Nna ha ma chọpụta na nwa ọ bụla batara n’ụwa bụ ngọzi.
Mee ka ha mata na mkpebi siri ike ịnabata nwata ma zụlite nwa ahụ bụ n’uche.
Nwanyị nwanyị anyị nke chere chere, nye ha ịhụnanya na obi ike gị. Amen. "
Ị ga tukwasiri obi na ekpere maka nnyefe na enweghị nsogbu.
Nsogbu diri ndi oru zuru oke bu ohere puru ime ndi nne.
Banye usoro a n'aka Onyenwe anyị Chineke niile dị ike, nwee ntụkwasị obi na ekpere nwere ike nakwa na Chukwu n’onwe ya na nwanyị ahụ nwanyị ahụ gọziri agọzi ga-elekọta mmadụ abụọ a.
Ọ dị mkpa ijide onwe gị ma nwee ndidi ichere ka ihe ọ bụla pụta. Chineke dị ike ma ya enweghi ike ọ bụla, ọ na - adị njikere mgbe niile ịge anyị ntị ma nyere anyị aka oge niile.
2) Ekpere Holy Ramon Nonato maka imu nwa (ezigbo omumu)
«Oh onye nlekọta dị elu, Saint Ramón, ihe atụ nke ọrụ ebere maka ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa, lee, ị ga -eji obi umeala kpọọ isiala n'okpuru ụkwụ gị ịrịọ enyemaka gị na mkpa m.
Dịka ọ bụụrụ nnukwu ọ joyụ gị inyere ndị ụwa na ogbenye nọ ụwa aka, nyere m aka, m, biko, Saint Saint Ramon dị ebube, na mkpagbu a.
Gị, Onye nchekwa dị ebube, abịara m gọzie nwa ahụ m na-ebu n’obi m.
Chebe m na nwa ahụ pụọ na anya m ugbu a na oge nnyefe ọzọ.
Ekwerem nkwa na ikuziri ya dika iwu ya na iwu ya si di.
Gee ntị n’ekpere m, onye hụrụ m n’anya, San Ramón, ma mee ka m bụrụ nne nwere obi nwa nwoke a nke m nwere olileanya ịmụ nwa site n’arịrịọ gị siri ike.
San Ramón Nonato ka amara dị ka senti nke ụmụ nwanyị dị ime. Ọ na-abụ onye ogbugbu nke ihe siri ike ebe ọ bụ na na ndụ ya, ọ gabigara ọtụtụ ọnọdụ siri ike ma merie ha niile na ijere Onyenwe anyị ozi mgbe niile. Ikwusa ozi-ọma na inyere ndị nọ na mkpa aka bụ ihe e ji mara ya mgbe niile. Ruo taa, ọ bụ onye enyemaka na-ekwesị ntụkwasị obi n'oge ndị a enwere nnukwu nchegbu.
3) Ekpere maka umu nwanyi di ime
«Nwa agbọghọ na -amaghị nwoke, ugbu a m ga -abụ nne dịka ị nọ, nye m obi yiri nke gị, kwụsie ike na mmetụta ya na enweghị ntụkwasị obi ya. Obi na -ahụ n'anya nke na -eme ka obi dị nro ma ghara ịjụ inye onwe ya ndị ọzọ.
Obi ... siri ike itinye ịhụnanya na obere nkọwa yana ọrụ dị ala. Obi dị ọcha na-enweghị ntụpọ, obosara, nke a na-enweta site n'ọ joyụ nke ndị ọzọ. Obi dị mma ma dịkwa mma nke na-adịghị ama onye ọ bụla ikpe ma ọlịghị ịgbaghara agbaghara na ịhụnanya.
Oh Chineke, i gosipụtara ịhụnanya gị n’ebe ohu gị dị Saint Ramon Nonato nọ, na-ewetara ya ndụ n’ụzọ dị ịtụnanya, ma I mere ya dịka ihe nchebe nke ndị nke anyị ga - abụ nne; site n’otuto gị na ịrịọ arịrịọ gị, a na m arịọ gị ka ndụ ọhụrụ ị mụpụtara n’ime m bia were obi ụtọ mee ka ọnụ ọgụgụ ụmụ gị mụbaa.
Maka Kristi Dinwenu anyị.
Ekpere maka umu nwanyi di ime di ezigbo ike.
Mgbe nwanyị dị ime, oge ịmụ nwa, ọ bụ ezie na emebere ya atụmatụ, nwere ike bụrụ ihe ijuanya na ezi na ụlọ ya niile, ọ bụ ya mere anyị ga-eji cheta ekpere a pụrụ iche oge niile.
Maka nne ya ihe kpatara nkwenye na obi iru ala nwere ahịrịokwu nke enwere ike ikwugharị ya N’oge ọmụmụ ma ọ bụ ezi na ụlọ nwere ike ịna-ekpe ekpere a mgbe ha na-eche.
Anyị nwere ike ịrịọ ka nnyefe ga-adị ngwa, na ọ bụ ihe nwute na ihe niile na-aga nke ọma na arịrịọ na-adịghị agwụ agwụ ga-abụ dị ka mkpa nke onye ọ bụla si ma jiri okwukwe siri ike na azịza ga-abịa.
4) Ekpere tupu ikwuputa (gaa nke ọma)
«Onyenwe anyị, Nna pụrụ ime ihe nile! Ezinụlọ bụ ụlọ ọrụ kacha ochie nke mmadụ, ọ bụ agadi dịka mmadụ n'onwe ya.
Mana, nihi na nke a bụ ụlọ ọrụ nke gị na naanị ụzọ mmadụ nwere ike isi bịa n'ụwa a wee zuo oke zuo oke, ike nke ihe ọjọọ na - alụso ya ọgụ, na - eme ka ụmụ mmadụ leda ntọala aekere nke mmepe anya anya. Onye Kristian
N'iwe iwe igbu onwe ha, ha na-anwa iti ezinụlọ ihe ọnwụ. Kwe ka anyi mee nke oma n’omume ojoo ahu, Onye-nwe-ayi, n’ime atụmatụ ndia na-emebi ezi na ụlọ nke Onye Kraịst.
Site na arịrịọ dị ebube nke ohu gị Saint Ramon Nonato, onye ọka iwu na-agbachitere n’eluigwe maka obi ụtọ, ọdịmma na udo nke ezi na ụlọ nke ndị Kristian, anyị na-arịọ gị ka ị na-anụ ekpere anyị.
Site na ntinye dị nsọ a, onye na-elekọta anyị, nye anyị ka enwere ike idobe ụlọ mgbe niile na-eso Nzukọ Ezigbo nke Nazaret.
Ekwela ka onye iro nke ezi ndu nke ndi Christian merie na mkwado ha, kama karie ka itughari ha n’ezi-okwu maka otuto nke aha nsọ Gi.
Ụwa Ihe ime mmụọ bụ eziokwu nke anyị kwesịrị ịmara mgbe niile. Kwadebe ihe niile maka oge nke nnyefe gụnyekwara ndụ ime mmụọ anyị n'ihi na ọ bụ ebe mmetụta uche ma ọ bụ mmetụta dị iche iche nwere ike ime ka anyị nwee nkụda mmụọ ma ọ bụ nwee obi nkoropụ n'etiti obere oge dị ka ihe siri ike, dị egwu na ọrụ ebube dị ka ọmụmụ nke ndụ ọhụụ.
Tupu amuo anyi, anyi nwere ike ikpe ezi na ulo anyi, ya na nne na nna nwa a, ya na ndi enyi anyi ndi huru isonye na ikpe ekpere nke puru ime ihe oma n’etiti omumu. Ekpere di ike ma oburu na ejiri okwukwe na obi ha mee ya ma odighikwa ezi ekpere karie nke nna ma obu nne n’ihi umu ha.
Nwee okwukwe na Jehova ekpere ịrịọ ma nwee ezi nkwenye na-enweghị nsogbu.
Ekpere diri Nwa Agbọghọ Atụrụ nwanyị